Volam-panjakana : vita ny tatitry ny Cour des comptes | NewsMada
Natolotry ny mpikambana ao amin’ny rafi-pitsarana Cour des comptes, ny 3 febroary teo, ny filoha Rajaonarimampianina, ny antontan-taratasy mirakitra ny fanadihadiana amin’ny fitantanana ny volam-panjakana. Nitarika azy ireo ny filoha vonjimaika, Rtoa Rabakovololona Bodo Saholy, nilazany fa andraikitr’izy ireo ny fijerena ny lafiny ratsy sy ny tsara amin’ny fitantanana ny volam-panjakana, ahafahana mijery ny fomba hanatsarana azy. Voarakitra ao anatin’ity tatitra ity koa ny soso-kevitr’izy ireo hanavaozana ny fomba fiasa. Nanomboka ny taona 2001 hatramin’ny taona 2014 ny fanadihadiana natao. « Sarotra aloha, hatreto ny hamoahana fehi-kevitra ny zava-misy ankehitriny, satria nifantoka tamin’ny famerenana ny fitantanam-bolam-panjakana araka ny tokony ho izy ny iraka nampanaovina anay », hoy ihany izy.
Hampahafantarina ny besinimaro tsy ho ela
Nambaran-dRtoa filoha fa dingana voalohany ihany ity fanomezana ny antontan-taratasy ny filoha ity, fa haroso eny amin’ny solombavambahoaka sy ny loholona avy eo. Avy amin’izany no hampahalalana ny besinimaro ny antsipiriany, ary hisy koa ny fampahalalana azy amin’ny mpanao gazety.
Rafi-pitsarana manokana mijery ny fanarahan-dalàna sy ny fitsipika mifehy ny fitantanana ny volam-panjakana eny amin’ny sampandraharaham-panjakana samihafa ny Cour des comptes. Ao anatin’izany ny fijerena ny lafiny teknika, ny fanajana na tsia ny fepetra sy ny sata manokana eny amin’ny rafi-panjakana. Arahiny maso koa ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny volam-panjakana. Mamoaka tatitra isan-taona izy ho fantatry ny besinimaro, ary azony atao ny mitsikera ny zavatra tsy mety sy ny lesoka rehetra amin’ny fitantanana sy ny fandaniana ny volam-bahoaka.